China High Chlorinated Polyethylene (HCPE) emepụta na soplaya |Dehua
Polyethylene dị elu chlorinated (HCPE), nke bụ ngwaahịa gbatịa nke polyethylene chlorinated (CPE), bụ ụdị kemịkalụ dị mma na ihe polymer sịntetị nwere arụmọrụ dị elu.
A na-emepụta polyethylene chlorinated dị elu site na polyethylene pụrụ iche site na chlorination miri emi.
Enwere ike ịchịkwa ọdịnaya chlorine nke HCPE sitere na 58% -75% dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị, yana arụmọrụ kemịkalụ kwụsiri ike.
Ọ nwere ike ịbụ soluble na organic solvents nke dị iche iche arene, hydrochloric ether, ketone na esters, paritcualrly oké solubility na methylbenzene na xylene ngwọta.
HCPE nwere nkwụsi ike kemịkalụ kachasị elu dabere na saturation nke ihe owuwu molekụla ya yana nnukwu atom chlorine, nke bụ mkpuchi mara mma na ihe nkiri na-eme resin na nrapado resin,
HCPE na-eme ka mkpuchi ahụ dị mfe imepụta ihe nkiri, nguzogide mmanụ, nguzogide ozone, mgbochi ultraviolet, nguzogide corrosion kemịkalụ, nguzogide acid, nguzogide alkali, na ikike ultraviolet dị mma, enweghị mmeghachi omume na nnu inorganic ọ bụla, ọkụ retardant, ezigbo impermeability na mmiri na vepo. , mgbochi mmiri chlorine gas na-eguzogide, CO2, SO2, H2S, ezigbo okpomọkụ kwụsie ike nke ga-agbaji mgbe okpomọkụ n'elu 130 ugbu a na-ahapụ HCL,
Enwere ike ịchekwa ya n'okpuru okpomọkụ nkịtị, ọ nwere ike nrapado dị elu na ngwaahịa ígwè na ciment, a na-ejikwa ya maka panit pụrụ iche na nrapado.
Ngwa nke HCPE
1.Special mgbochi corrosive agba: mmiri agba, akpa agba, mgbochi corrosion primer, mgbochi corrosive imecha agba,, mgbochi corrosive varnished, mgbochi corrosive lacquer enamel, anit corrosive na nchara agba, mgbochi corrosive aesthetical agba, arọ ọrụ agba (akwa, ígwè Ọdịdị, chemical igwe, nnu factory, azu igwe) , anwụrụ mkpuchi wdg.
2.Fire retardant agba, ọkụ retardant agba, mkpuchi maka n'èzí nke osisi na ígwè Ọdịdị.
3.Building mkpuchi, mma ụlọ mkpuchi, ihe n'èzí primer agba.
4.Road akara agba: eserese maka ọdụ ụgbọ elu, pavement akara agba, ụzọ akara agba na reflectorised agba maka okporo ụzọ.
5.Adhesive: a na-ejikarị eme ihe maka ijikọ ngwaahịa pvc dị iche iche dị ka PVC ọkpọkọ PVC, profaịlụ PVC.
6.Ọ nwere ike iji dị ka ihe mbụ na-ebipụta ink na adhesives.
7.Ọ nwekwara ike-eji dị ka ire ere retardant gị n'ụlọnga na akwụkwọ na eriri ubi, okpomọkụ na-eguzogide modifier na nrapado maka roba ngwaahịa(isi ọdịnaya bụ neoprene), modifier na ink maka akwụkwọ na aluminum foil.
HCPE bụ ihe magburu onwe film akpụ ihe maka pụrụ iche anticorrosive agba, nke nwere uru nke ogologo ndụ ojiji, ngwa ngwa akọrọ, na-akparaghị ókè maka okpomọkụ, otu akụrụngwa, na-adịghị egbu egbu, wdg.
<15 > 15, <60 >70 Viscometer ntụgharị
58-75 58-75 58-75 Site na Mercuric nitrate Volumetric
Okpomọkụ ire ere ℃≥
120 120 120 Kpoo ọkụ site na bat mmanụ
0.2 0.2 0.2 Akọrọ okpomọkụ mgbe niile
Ọcha ntụ ntụ Nyocha anya
Ọnweghị ihe na-esighi ike Nyocha anya
Nchekwa na ahụike
HCPE (Elu Chlorinated polyethylene) bụ ngwaahịa kemịkalụ dị ọcha na-enweghị caron tetrachloride fọdụrụnụ na enweghị isi, anaghị egbu egbu, ire ọkụ, kwụsiri ike na adịghị emerụ ahụ mmadụ.
Nkwakọ ngwaahịa, nchekwa na njem
Akpa dị n'èzí: PP akpa akpa .
N'ime akpa: PE thin film .
A ghaghị ịchekwa ngwaahịa a n'ụlọ nkwakọba ihe akọrọ na ikuku ventilashị iji zere anwụ, mmiri ozuzo ma ọ bụ okpomọkụ, a ga-ebuga ya n'ime ihe dị ọcha, ngwaahịa a bụ ụdị ngwaahịa na-adịghị ize ndụ.
Nke gara aga: Rubber Chlorinated (CR)
Osote: Igwe mmiri nwere okpukpu abụọ na emulsion agba rọba